Kubvumirana Kwakawanda KweChikwata cheYikiki Zvikoro: Chikamu che2020
Ivy Ivy Schools Zvimwe zveMatunhu Akanyanya Kupindira Munyika
Zvose zvikoro zveYiv League zvine chibvumirano chokugamuchirwa che 14% kana chakaderera, uye vose vanobvuma vadzidzi nedzimwe nhoroondo dzedzidzo nedzimwe dzedzidzo. Mumakore achangobva kupfuura, Cornell University yakagamuchira chikwata chakanakisisa pakugamuchirwa pakati peIvies, uye Harvard University yakave yakabvuma kuderera.
Itafura iri pasi apa inoratidza kukurumidza kuwedzerwa kwehuwandu hwezvidzidzo zvezvikoro zveLiv League . Kuti uone kuti nderei yemakoro uye chiyero chekuenzanisa chinowanikwa iwe unogona kunge uchida kubvumirwa, tora pane graph link pakurudyi.
Ivy League Acceptance Rates yeChikoro che2020
Chikoro Nhamba ye
Nhamba Chinhu GPA-SAT-ACT
Brown University 32,390 2,919 9% Mashoko kubva kuBrown ona girafu
Columbia University 36 292 2,193 6% Columbia Spectator ona girafu
Cornell University 44,966 6,277 14% Cornell Chronicle ona girafu
Dartmouth College 20675 2,176 10.5% Dartmouth News ona girafu
Harvard University 39041 2,037 5.2% Harvard Magazine ona girafu
Princeton University 29 303 1,894 6.5% Nhau kuPrinceton ona girafu
University of Pennsylvania 38 918 3,661 9.4% The Daily Pennsylvanian ona girafu
Yale University 31,455 1,972 6.7% Yale News ona girafu
Uchapinda? Tora mikana yako nechinhu ichi chesununguko kubva kuCappex
Nei Iri Ivy League Acceptance Rates So Low?
Gore roga roga, kukosha kwekubvumira kweLy League kunoderera uye kwakaderera kunyange kana zvikoro zvingangoona kuwedzera kuduku nguva nenguva. Chii chinoita kuti kuwedzera uku kuonekwe kusingaperi kusarudzo?
Heano zvinhu zvishoma:
Inowanzoshanda: Zvikoro zveYiv League pamwe nemamwe mazana emamwe makoroji anosarudza uye masayunivhesiti anobvuma Common Application . Izvi zvinoita kuti zvive nyore kuti vadzidzi vashandise kune zvikoro zvakawanda kuti ruzivo rune zvizhinji pamusoro pekushandiswa (kusanganisira nyaya huru yekushandiswa ) inofanira kusikwa kamwe chete. Izvozvo zvakati, zvose zveIvies zvinoda maverengi akawanda ekuwedzera kubva kune avo vakakumbira kuti irege kuedza kushanda kune zvikoro zvakawanda.
Ruremekedzo Arms Race: Gore roga roga, Ivies inokurumidza kubudisa dhiyabhorosi yavo yakagamuchirwa, uye zvinyorwa zvichishevedzera kunyika kuti chikoro chaiva ne "Chikuru Chikumbira Chidzimba MuChikoro Chese Chikoro" kana kuti chaive ne "Gore Rakasarudzwa Kwazvo MuChikoro Chechikoro . " Uye kana vachizvibvuma kana kwete, Ivies nguva dzose vanozvifananidza ivo pachavo. Zvidzidzo zvine zita rakasimba rekuzivikanwa kuti havadi kuisa mari yakawanda kana kushanda mukutsvaga, asi ivo, chaizvoizvo, vanochera zvikuru. Dzimwe maitiro anoreva kusarudza zvimwe zvinoshandiswa zvinoreva kukudzwa.
Mumiririri Wemagariro Edzimumiro: Chimwe chikamu chikuru chekutambira-kuderera kubvuma mitero inowedzera kuwedzera kwezvidzidzo kubva kune dzimwe nyika. Kunyange zvazvo huwandu hwevanhu vakuru vekuchikoro chekuUnited States husina kuwedzera zvakanyanya, ichocho chinokanganiswa nekuwedzera kwakanyanya kwezvidzidzo kubva kune dzimwe nyika. Ivies ane zita rakasimba kugamuchirwa munyika yose, uye vanopawo rubatsiro rwekupa mari yakawanda kuvadzidzi vanofanirwa kubva kuvadzidzi vemarudzi ose. Zviuru zvevadzidzi vanobva kunyika dzakadai seChina, India, neKorea zvinoshandiswa kune zvikoro zveLiv League.
Sei Izvo Zvisingakwanisi Kubvuma kuConell kune Zvimwe Ivies?
Munzira dzakawanda, hazvisi.
Chikoro cheCornell chinowanzotariswa pasi nedzimwe Ivies (uye vanobvunza kuIvies) nokuti kubvuma kuwedzerwa kune nguva dzose kune dzimwe dzidzo. Kugamuchira chidimbu, zvisinei, iyo inongova imwechete ye selectivity equation. Kana iwe ukanyora paGPA-SAT-ACT mafirimu ari kumusoro, uchaona kuti Cornell inobvuma vadzidzi vane simba rakafanana kune avo vanopinda muHarvard neYale. Ichokwadi kuti kana iwe uri wakarurama-Mudzidzi ane mapoka akawanda e AP uye chikamu che1500 SAT, iwe unogona kupinda Cornell kupfuura Harvard. Cornell inongova yunivhesiti yakakura zvikuru saka inotumira tsamba yakawanda yekugamuchira. Asi kana iwe uri "B" mudzidzi ane pakati peSAT scores, funga zvakare. Kuchinja kwako kwekupinda muCornell kuchave kwakanyanyisa.
Rini Kubvuma Kuwanikwa Kwemari yeChikoro che2021 Chingawanikwa?
Zvidzidzo zveLiv League zvinokurumidza kuparidzira zviitiko zvekugadzirisa kwemazuva ano munguva pfupi apo maitiro ekugamuchirwa akaendeswa kune avo vakakumbira.
Kazhinji nhamba dzekupedzisira dzinowanikwa musi wekutanga kana mbiri dzaApril. Ramba uchifunga kuti kutambira kwekugamuchirwa kwakaitwa muna April kunowanzochinja zvishoma pane nguva sezvo makoroji achishanda pamwe chete nemichero yavo yekupedzisira munguva yechando nezhizha kuti vaone kuti vanozadzisa zvinangwa zvavo.
Shoko Rokupedzisira nezve Ivy League Acceptance Rates:
Ini ndichapedza nezvikamu zvitatu zvezano zvakabatana neIvies:
Iwe unofanira kugara uchifunga nezveIvies kusvika kuchikoro . Kubvuma kubhadharwa kwakanyanya zvokuti zviuru zvevadzidzi vakasiyana-siyana zvinorambwa. Wako masere AP, madhigirii ane gumi nemazana mashanu GPA uye 1580 SAT chikamu hachisi chivimbo chekupindirwa (kunyange zvichinyatsobatsira!). Gore rose, ndinosangana nevadzidzi vakaora mwoyo vane nhema vachifunga kuti vangapinda mune imwe yeIvies chete kuti vapedzisire vane tsvina yekuramba. Nguva dzose shandisa zvikoro zvishomanana zvisina kusarudzwa kunyange iwe uri mudzidzi anoshamisa.
Hapana mashiripiti pamusoro peIvies. Zvinoshungurudza pandinosangana nevadzidzi (uye vabereki vavo) avo vakasunga manzwiro avo ekuzviremekedza nekutenderwa kuchikoro cheChiki. Kune mazana emakoroji nemayunivhesiti muUnited States ayo achaendesa dzidzo iyo yakanaka kana iri nani pane yeChild education education, uye kune zvizhinji zvezvikoro zvisiri izvo zveEki League zvinoita zviri nani maererano nekukura kwevadzidzi uye kubudirira kwehupfumi.
Mairi masere ini haasi zvimwe chete. Gore roga roga iwe uchaona musoro wenyika yose wemwana uyo akapinda mune zvikoro zvese zveEki League. Iyi nhau nguva dzose inondisiya ndichishamisika kuti nei mumwe munhu achifunga kuti mumwe munhu angashanda kune vose vasere. Mumwe mudzidzi anoda muzinda weguta angave achifara paYale, Brown, kana Columbia, asi angave anoshungurudzwa mumataundi maduku eDartmouth neConell. Mumwe mudzidzi anofarira unyanzvi aizowana purogiramu yepamusoro paC Cornell, asi kune zvikoro zvakawanda zviri nani zvehujini kunze uko kune vazhinji veIvies. Mumwe mudzidzi ari kutsvaga dzidzo yepamusoro-soro yepamusoro-soro angave akachenjera kudzivisa zvikoro zvakadai seColumbia neHarvard apo kunyoresa kwevadzidzi kuchikoro kunodarika chikoro chechikoro chechikoro chechipiri kusvika 2 kusvika ku1.
Maguta Makutaji Makuru Neyunivhesiti Beyond Harvard neNUU
Majokisi Akasviba Masikati-Masikati
Kudzidzisa Chirungu kune Vadzidzisi Vose
Kutaura Nezvebasa Rako - Bhizinesi reChirungu ChiShona
Mashandisiro Aungashandisa Weather Maps Kuti Uite Zvakafanotaurwa
10 Craziest Villains mu 'Avatar: The Last Airbender'
Rebecca Mukoti uye muSarem Witch Miedzo
Colgate University GPA, SAT uye ACT Data
Kodzero dzevakadzi chii?
5 Piano Nziyo dzeVakaora Mwoyo
Biography yeTexas Hero uye Anonakidza Jim Bowie
Zvirongwa zveArt for Fine Motor Skills uye Mirayiridzo Inotevera
Kutsvakurudza Ancestors muBritish Census
Gadzira Internet Shortcut (.URL) Faira Kushandisa Delphi
7 Mhando dzeBass Lines
Nhungamiro Nhanho-Nhanho kuGreat Golf Stance
Chii Rhythm Chikamu?
Yunivhesiti yeEvansville GPA, SAT uye ACT Data
Yoke uye Yolk
Flagler College GPA, SAT uye ACT Data
VaGiriki Vaidavira Nhema Dzadzo Here?
Nhamba dzeMatanho muZvinyorwa